Dowladda Turkiga ayaa Hub Casri ah oo la mid ah kuwa ay ciidammadooda Ankara isticmaalaan ku wada simi doonta dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. – Xeernews24
27. Dezember 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Milateriga Soomaaliya ayaa markii u horreeysay lagu wareejiyay qoriga MPT- 76.
Dawladda Turkiga ayaa Soomaaliya ugu deeqdey ku dhawaad 450 qori oo ah MPT-76, kaas oo lagu sameeyo Turkiga, Waana qori casri ah oo ay Ciidamada Turkiga u adeegsadaan howl-galada la xidhiidha la dagaalanka Argagixisada.
Ciidammada tababarka ku qaadanaya xerada Turkiga uu dhawaan ka furey Muqdisho, ayaa la sheegay qorigan inay adeegsan doonan, sidda lugu baahiyay Warbaahinta Turkiga.
Hubkan waxaa la sheegay inuu qeyb ka yahay qorshaha uu Turkiga ku qalabeynayo ciidammada milateriga Soomaaliya, Labada dal ayaa horey u gaadhey heshiis iskaashiga dhanka difaaca iyo tababarka ciidammada.
Qorigan ayaa culeyskiisu yahay 4.1 KG, waxaa uu wax ka dili karaa masaafo dhan 600 Mitir, waxaa uu dhirirkiisu yahay 92 cm, waxaana halkii daqiiqo ka dhaca 650 xabadood.
Qoriga MPT-76 ayaa waxaa ku hubeysan ciidammada ilaaliya madaxtooyada Turkiga, waa qori casri ah oo ay xilligan xiiseynayaan inay iibsadaan dalal uu ka mid yahay Boqortooyada Sacuudi Carabiga.
Madaxwayne Farmaajo ayaa Kormeer ku tagay Kaydka Hubka Soomaaliya loogu tala galay.
Guul iyo gobanimo Hayaanka Geedigu Waa Horusocod,
SAWIRRO: Munaasabad lagu daah furayo Xarunta Maamulka Hawada Soomaaliya oo Muqdisho... Qarax Xeelad cusub loo adeegsaday oo Ciidanka Jabuuti ee AMISOM lagaga dilay...